मधुमेह नियन्त्रण गर्न तितेकरेला उपयोगी मानिन्छ, यस्ता छन लाभहरु - NepalKhoj
मधुमेह नियन्त्रण गर्न तितेकरेला उपयोगी मानिन्छ, यस्ता छन लाभहरु
नेपालखोज २०७६ पुष ३ गते ७:२९
मधुमेह आममानिसको ठूलो चिन्ताको रूपमा फैलिएको छ । यस रोगका कारण मानिसले आफूलाई मन परेको खाना खानबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।
मधुमेह रोगका कारण मानिसमा ब्लडप्रेसर बढ्ने हुन्छ । मधुमेहका कारण मानिसमा अरू रोगसँग लड्ने क्षमता पनि कम हुन्छ । मधुमेह रोगका कारण मोटोपनको समस्या, श्वासप्रश्वास तथा मुटु रोगसम्बन्धी समस्या, किड्नीमा समस्या हुने गर्छ ।
मधुमेह नियन्त्रणमा राख्न खानपानमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । यो रोगको ३ वटा चरण हुन्छन् । रोग पहिलो र दोस्रोे चरणमा छ भने मानिसले खानपानमा ध्यान दियो भने यो रोग नियन्त्रण हुन्छ । तेस्रो चरणमा पुगेपछि यो रोगको समाधान गर्न औषधिका प्रयोग गर्नुपर्छ ।
मधुमेह रोग नियन्त्रण गर्न तितेकरेलाको जुस प्रयोग महत्वपूर्ण मानिन्छ । तिते करेलाको नियमित प्रयोगले मानिसलाई सक्रिय बनाउँछ । यसको प्रयोग गर्नाले मोटोपनमा पनि कमी आउँछ । करेलामा रहेको क्याटरिन नामक तत्वले सुगर नष्ट गर्छ र रगतको प्रवाह बनाइ राख्न मद्दत पुर्याउँछ ।
करेलाको जुस बनाउनका लागि त्यसलाई काटेर करेलाभित्र भएको सेतो भागलाई फाल्नुपर्छ । करेलालाई ३० मिनेटसम्म चिसो पानीमा भिजाएर राख्नुपर्छ । त्यसपछि जुस मेकरमा राख्ने अनि त्यसलाई पिसेर पातलो कपडाले छान्ने । अब करेलाको जुस पिउनयोग्य भयो । यो जुस हप्तामा २ देखि ३ दिन खानाले मधुमेह रोगीलाई धेरै फाइदा पुर्याउँछ ।
मधुमेहबाट जोगिन दैनिक मेवाको सेवन, उमेरभन्दा ७ वर्ष जवान
दैनिक मेवाको सेवन, उमेरभन्दा ७ वर्ष जवान
कफी : स्वास्थ्यका लागि फाइदा/बेफाइदा दुवै
कसरी हुन्छ जलविन्दु ? कारण र समाधान यस्ता !
एफएओले भन्यो- तीव्र खाद्य असुरक्षा देखियो भोकमरी बढ्छ